January 2014 | OKKALA STORE
Viber version 4.2.0.1656 for android(latest versio...
WESTSIDE Ye Naung Ft Ju Arkar Production
Bagan Keyboard Pro v 3.2.2 for android(latest vers...
Watch Full One Direction: This Is Us Movie
ထီပေါက်စဉ်ကြည့်မယ် for Android
Lay Phyu - စိတ်ပူတယ် ( MTV )
J-Me & Thi Ri Swe RIDE WITH ME_directed by AUNG MY...
Make Me Shudder - Trailer
Tom Yum Goong2~ The Protector2from Tony Jaa Tr...
DHOOM:3 - TRAILER - Aamir Khan | Abhishek Bachchan...
THE LEGEND OF HERCULES - Man. God. Hero. Final The...
Viber version 4.2.0.1656 for android(latest version)
Posted by okkala net at 6:39 PM No comments:
အခုနောက်ပိုင်းရဲ့ နာမည်ရလာတဲ့ လူငယ် ဒါရိုက်တာ အာကာ နှင့် Hip Hop အဆိုတော် ရဲနောင် တို့၏ပူးပေါင်းတင်ဆက်မှု
Posted by okkala net at 10:30 PM No comments:
Bagan Keyboard Pro v 3.2.2 for android(latest version)
Android ဖုန်း/Tablet တွေအတွက် Bagan Keyboad Pro အသစ်ထွက် version Bagan Keyboard Pro v3.2.2
for Android ကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ကွန်ပျူတာဇော်ဂျီလက်ကွက်အတိုင်းပဲဖြစ်တာကြောင့် စာရိုက်ရတာတော်တော်လွယ်ကူပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဒီကီးဘုတ်လေးကိုအသုံးပြုပြီးစာရိုက်မယ်ဆိုရင် မြန်မာစာ အရေးရော အဖတ်ရောမှန်ပါတယ်။
Posted by okkala net at 9:53 PM No comments:
နှုတ်ခမ်းနီမလေးများရဲ့ အသည်းကျော် ONE DIRECTION အဖွဲ့၏ အကြောင်းကို ရိုက်ကူးထားတဲ့ This Is Us - Full Movie ထွက်ရှိလာပါပြီ။ Movie လိုချင်သူများ OKKALA Music Video ထဲတွင် ၀င်ရောက်ရယူနိုင်ပါပြီ
Posted by okkala net at 8:07 PM No comments:
Android OS သုံးဖုန်းတွေအတွက် JAS Mobile ကနေထုတ်လုပ်ထားတဲ့ ဖုန်းဆော့ဝဲလေးဖြစ်ပါတယ်။ မိမိကံစမ်းထားသော ထီလက်မှတ်၏ အက္ခရာနှင့် နံပါတ်များကို ထဥ၁့်သွင်းပြီး “ထီနံပါတ်တိုက်မယ်” ကိုနှိပ်ပြီးစစ်ဆေးနိုင်သလို “ထီပေါက်စဉ်ကြဥ၁်မယ်” ကိုနှိပ်၍လဥ၁်း မိမိထီနံပါတ်ကို မိမိကိုယ်တိုင် တိုက်ကြဥ၁့်နိုင်ပါဥ၁်။ ထီပေါက်စဉ် apk ကို စသုံးစဉ် internet နှင့် ချိတ်ဆက်၍ data ယူရပါမဥ၁်။ ကျန်အချိန်များ တွင် offline သုံးနိုင်ပြီး လစဉ် တစ်လ တစ်ကြိမ် internet နှင့် ချိတ်ဆက်၍ update data ယူရပါမဥ၁်။ကျပ်သိန်း ၁၅၀၀ ဆုကြီး ပိုင်ဆိုင်နိုင်တဲ့ ကံထူးရှင်များ ဖြစ်ကြပါစေ။
Ref & Credit: Jas.com.mm
Posted by okkala net at 7:22 PM No comments:
အခု MTV ထဲမှာ ကမ္ဘာကျော် အဆိုတော် Celine Dion နဲ့ တွဲဆိုနေတဲ့ ကောင်မလေးက Charice တဲ့ သူက ကျွန်တော်တို့ အရှေ့တောင် အာရှ ထဲက ဖိလစ်ပိုင် နိုင်ငံသူလေးပါ သူရဲ့ အသံက အရမ်းကောင်းလွန်းအားကြီးတော့ သူကို့ Celine Dion က ပွဲထုတ်ခဲ့တာပါ
Posted by okkala net at 5:59 AM No comments:
Posted by okkala net at 10:35 PM No comments: Links to this post
J-Me & Thi Ri Swe RIDE WITH ME_directed by AUNG MYAT
IRIS -2( ကျွန်တော်ကြည့်ဖူးသမျှ korea ကားတွေထဲမှာ ဒီကားအကောင်းဆုံးပဲ လို့ထင်ပါတယ် )
Full Movie ကိုတော့ OKKALA MOVIE ထဲမှာ ကြည့်လို့ရပါတယ် )
Posted by okkala net at 8:00 PM No comments:
Make Me Shutter ( သရဲကား မကြည့်ရတာ ကြာပြီဖြစ်တဲ့ဘော်ဒါတွေအတွက် ထိုင်းကျောင်းသား သရဲဟာသကား - တော်တော်ကောင်းတယ်) Full Movie ကြည့်ချင်ရင်တော့ OKKALA MOVIE မှာ ကြည့်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာ)
Posted by okkala net at 7:53 PM No comments:
ONE BAK -3( အတိုက်အခိုက် အသတ်အပုတ် အရမ်းလှတဲ့ တိုက်ကွက်တွေနဲ့ နောက်ထပ် ခြေလှမ်းလာတဲ့ ထိုင်း ၀မ်းဘတ် ဇာတ်ကားပါ ) Full Movie ကြည့်ချင်ရင်တော့ OKKALA MOVIE မှာ ကြည့်လို့ရပါတယ်
Posted by okkala net at 7:39 PM No comments:
DHOOM:3 - TRAILER - Aamir Khan | Abhishek Bachchan | Katrina Kaif | Uday...
DHOOM-3 ( ဒွန်းဇာတ်ကားကို မသိတဲ့သူက ခေတ်မမီဘူးလို့တောင် ပြောလို့ရတဲ့ ဇာတ်ကားတကားပါ - အကြိုက်ချင်းတူမယ်လို့ထင်ပါတယ် အခုတော့ Trailer ပဲ ကြည့်ပါဦး ..Full Movie ကြည့်ချင်ရင်တော့ OKKALA MOVIE မှာ ကြည့်လို့ရပါတယ် )
Posted by okkala net at 7:25 PM No comments:
THE LEGEND OF HERCULES - Man. God. Hero. Final Theatrical TRAILER [HD] -...
ကျွန်တော်တို့ ငယ်ငယ်တည်းက သဘောကျနှစ်သက်ခဲ့ရတဲ့ သူရဲကောင်း ဟာကျူလီကို Version အသစ်နဲ့ ပြန်ရိုက်ထားတာပါ..အရမ်းလန်းပါတယ် ...အခုတော့ Trailer တင်ပေးထားပါတယ်...full movie ကြည့်ချင်ရင်တော့ OKKALA MOVIE ထဲမှာ ကြည့်လို့ရပါတယ်
Posted by okkala net at 7:04 PM No comments:
Posted by okkala net at 5:34 PM No comments: